Intloko yeshawari yaseTshayina, abavelisi beShower hose, ababoneleli beSeti yeshawari-iHuanyu Sanitary Ware
Le ntloko yeshawari yesandla yoMzi ijija iigiya ezintlanu kwi-45 degrees kwaye itshintshele kwiigiya ezintlanu ezahlukeneyo ngokulula. Umgangatho ophezulu we-ABS resin, ukhuseleko / uhlaza / ukhuseleko lokusingqongileyo
Le Ishawa yesandla esineMisebenzi emiHlanu yaseKhaya Iindlela ezintlanu zokukhupha amanzi zingatshintshwa ngokuthanda ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zosapho lonke.
Le Electroplating Five-Function Hand Shower Yonwabele ishawa phantsi koxinzelelo lwamanzi oluqhelekileyo. I-silicone ekumgangatho ophezulu, yomelele kwaye yomelele
Le ABS yeplastiki ye-Five-Function Hand Shower Ayiyiyo ishawa ecinezelekileyo, ifanelekile kuxinzelelo lwamanzi oluqhelekileyo, amanzi athambileyo, akukho mvakalelo yokubetha, kwaye ishawari ikhululekile.
I-Ningbo Huanyu Sanitary Ware Limited, iqela elinamandla kunye nelichwephesha lijolise kwiimveliso zegumbi lokuhlambela ngakumbi kwiimveliso zeshawari: intloko yeshawari, iseti yeshawa, ithumbu leshawari, isilayidi sokutyibilika.
Ngemibuzo malunga neemveliso zethu ezinje ngentloko yeShower, iHose yeShower, iShower Set okanye uluhlu lwamaxabiso, nceda ushiye i-imeyile yakho kuthi kwaye siya kuqhagamshelana phakathi kweeyure ezingama-24.